ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ကိုယ်တော်၏ Guy ပြောင်းပေးပါရန်မကြိုးစားသင့်အဘယ်ကြောင့်
အဲဒီမှာဤမျှလောက်သင့်ရဲ့ယောက်ျားကိုပြောင်းလဲနိုင်ပုံအကြောင်းတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား. သင်သည်သူ့ကိုယဉ်နှင့်သူ့ကိုသင်ဖြစ်လိုလူကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သို့ပေးနိုင်. ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာရဲ့ရိုးသားပါစေသတည်း, အဘယ်အရာကိုအမြဲကျမ်းစာလာ၏ပစ္စုပ္ပန်တွင်ပြောသွားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်၏ရေရှည်အကျိုးဆက်များအပေါ်မသိကျိုးကျွန်ပြုနေပုံရသည်. သမ္မာတရားကိုသူသည်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုမကြောင့်သင်တို့ကိုသာလူကိုပြောင်းလဲချင်သောကြောင့်.
သင်ချစ်သောသူသို့မဟုတ်တကယ်သင်သည်ထိုသူတို့ပြောင်းလဲချင်ကြဘူးတဲ့ကောင်လေးကြိုက်လာတဲ့အခါ. ထိုသူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုအတိအကျတော်မူသောသူဖြစ်ပါစေသောဒြပ်စင်များဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုလောက်မုန်းတာတောင်မှအရာတို့ကိုသင်တို့ကကိုယ်တော်နှင့် ပတ်သက်. ကိုးကွယ်ခြင်း. သင်သည်ထိုသူတို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ရေရှည်တွင်အပြင်၌သူတို့သည်သင့်ခံချိမခံတက်အဆုံးသတ်မည်. ထိုအသင်သည်ထိုသူတို့အပြစ်တင်နိုင်ပါသည်? သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကဲ့သို့သင်တို့အိမ်အပြန်မှာနှင့် Lasse ပြောင်းလဲနေတဲ့မလား? ကြှနျုပျတို့သဝက်နှလုံးမေတ္တာကိုမလိုချင်ကြဘူးနေသောနေပါစေဆင်းနက်ရှိုင်းသော. ပဲသည်ငါတို့အဘို့တရားဘက်၌မအဘယ်သူသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်ဖြေရှင်းသည်ထိုမေတ္တာ. နှင့်အံ့သြဖွယ်ဒီလိုမျိုးရှာဖွေသောလူ (၏သင်တန်းမသမာမှုများပေမယ်တိုင်းကြားဆက်ဆံရေးကအချိန်လေးင်ခဲ့သည်) သင်အခမဲ့ဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်မှာမေတ္တာကို, မင်္ဂလာရှိသော, သင်ရဲရင့်ဖြစ်ကြသည်သူသည်သင်တို့ကိုချစ်ကြောင်းသိကျွမ်းခြင်း၌ secure. သူတို့ကသူတို့သူမသည်တစ်စုံတစ်ဦးသို့ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကိုပထမဦးဆုံးကောင်လေးကိုပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားပါဘူး. သူတို့ကစောင့်ဆိုင်းနှင့်ယင်းသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲသူတို့လောကပြောင်းသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာ.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရိုသေလေးစားမှုအကြောင်း. သင်တို့အထဲကထွက်ရရန်မျှော်လင့်သောအရာကို၌ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. သူ့ကိုသင်ကသင်ပြောင်းချင်ကြပါဘူးဖြစ်လျှင်အလှည့်တွင်သင်သူ့ကိုပြောင်းလဲမရိုသေလေးစားမှုရှိသင့်. သင်အမှန်တကယ်သူ့ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုပြောင်းလဲဖို့စိတ်ကူးကသင့်စိတ်ကိုဖြတ်ကူးပါဘူးချစ်ကြလျှင်မှတပါးအခြားသောဘုရား. ငါသည်သင်တို့ကိုချဉ်းကပ်မှုပြောင်းလဲလာ / တပြင်လုံးကိုယဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးအသက်တာရှည်မိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သင်သည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာလမ်းကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်သင်နှင့်အတူရှိ. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးလိုပါ?